RW Abiy: Calanka waa la bedeli karaa hadii raali laga wada yahay - Halbeeg News
ADDIS ABABA(HALBEEG) Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in calanka la bedeli karo hadii raali laga wada yahay balse aan loo baahneyn in calanka dartiis ay dalka uga dhacaan rabshado iyo iska horimaadyo.
Taageerayaasha jabhadda Oromada( OLF) iyo dhalinyaro ka soo horjeeda ayaa maalintii shalay ku dagaalamay magaalada Addis Ababa kadib markii tageerayaasha OLF isku dayeen in meel uu ku buufsana calanka Itoobiya ay ku bedelan kan jabhada.
“Mareykankaba calankiisa wuxuu is beddelay ilaa iyo 13 jeer marka Itoobiyana haddii ay muwaaddiniintu dalka raalli ka noqdaan waa la beddeli karaa, waa ineynu ka fikirnaa oo keli sidii dalka aan horumar u gaarsiin laheen nolosha dadkana aan wax uga beddeli laheen, ma aha inaan ku mashquulno waxyaabo aan dalka wax ku soo kordhineyn oo weliba burbur u horseedi kara”. Ayuu yiri RW Abiy
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa tilmaamay in calanka uu yahay astaan dal ama xisbi siyaasadeed uu u adeegsado in lagu aqoonsado, cid walbana waxay xaq u leedahay iney aragtida siyaasadeed ee ay aminsan tahay ay si xor ah u soo bandhigto, corriyadaasna waxaa ka mid ah calanka.
“Waa ineynu ka fikirnaa oo keli sidii dalka aan horumar u gaarsiin laheen noolasha dadkana aan wax uga beddeli laheen, ma aha inaan ku mashquulno waxyaabo aan dalka wax ku soo kordhineyn oo weliba burbur u horseedi kara” ayuu yiri Abiy Axmed.
Booliska magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in rabshadihii shalay ka dhacay magaalada ay sababeen dhawaacyo.
Ra’iisul wasaare Abiy ayaa tan iyo markii la magacaabay waday dadaallo lagu xasilinayo gobolka iyadoo dowladda Itoobiya ay liiska aragixisada ka saartay ururada ONLF, OLF iyo Ginbot7, taasoo keentay in isku soo dhawaasho dhaxmaro dowladda iyo ururadan.
Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo tababar loogu qaaday Turkiga